Nagarik News - सिएसआरमा पनि प्रतिस्पर्धा
होमपेज / अर्थ / कर्पोरेट / बैंकिङ / सिएसआरमा पनि प्रतिस्पर्धा
सिएसआरमा पनि प्रतिस्पर्धा	26 May 2013 | 10:00am आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
Print Email Be the first to comment! 12345 (0 votes)
काठमाडौं- व्यापार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु पछिल्लो समय संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा पनि भिडिरहेहा छन्। कम्पनीहरुले व्यवसाय गरिरहेको समाजप्रति उत्तरदायित्व पनि छ है भनेर स्वस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्ने परिपाटी सिएसआर हो। यसमा कम्पनीहरुले आर्जित नाफाको केही हिस्सा समुदायलाई कुनै न कुनै रुपमा दिने गर्छन्। यसमा नगद, भौतिक सामग्री, छात्रवृति प्रदान गर्ने लगायतका काम गरिन्छ। पछिल्लो समय सनादेखि ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानले सिएसआरमा नाफाको केही हिस्सा खर्च गर्न थालेका छन्। यसमा ठूला र धेरै नाफा गर्नेले धेरै र थोरै नाफा गर्नेले थोरै लगानी गर्छन। व्यवसायिक घरानामध्येको सबैभन्दा ठूलो चौधरी ग्रुपले सिएसआरमा लाखौं रकम खर्च गर्ने गरेको छ। यो समूहले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमा रकम खर्च गरिरहेको छ। समता शिक्षालाई आर्थिक सहयोग गर्ने देखि देशमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने चाउचाउको नामममा सुरु गरेको वाईवाई ज्ञानज्योति छात्रवृत्ति वितरण गर्नेसम्मका सामाजिक काममा चौधरी समूहले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। सिजी फाउन्डेसन मार्फत उसले सिएसआरका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ। केही समय अघिमात्रै उसले बंगलादेशको युनुस सेन्टरसँग मिलेर नेपालमा व्यवसायिकताको विकासका लागि सोसियल बिजनेस सञ्चालनका लागि दस लाख अमेरिकी डलरको कोष समेत स्थापना गरेको छ। खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीले पनि सिएसआरमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। उसलेे नवलपरासीस्थित उद्योग वरपरका समुदायमा र स्कुलका लागि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली खेलकुदलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्न गोर्खा ब्रुअरीले नै भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि ७५ लाख रुपैयाँको पुरस्कार प्रयोजन गरेको थियो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 'खेल पर्यटन' सहित अन्य धेरै सामाजिक कार्यका लागि लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। सूर्य नेपालले आशा नामक अभियान अन्तर्गत शिक्षा, प्रकृति अभियान अन्तर्गत वनजंगलको संरक्षण र वृक्षरोपण, स्वास्थ्य अभियानमा पनि जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ। खेल पर्यटन अभियान अन्तर्गत सूर्य नेपालले प्रत्येक वर्ष नेपालमै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको सूर्य नेपाल मस्टर्स गल्फ प्रतियोगिता आयोजना गर्छ।सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने मध्येका दूई दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल पनि सिएसआरको मामिलामा अग्रपंक्तिमा छन्। एनसेलले विगत तीन वर्षयता शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले एनसेललेे सहयोग गरिरहेको छ। उसले मुलुकभरका ४१ जिल्लाका स्कुललाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ। सन् २०१३ मा मात्रै उसले करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम शिक्षामा खर्च गर्ने बताएको छ। जसबाट २५ हजार विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। देशका विभिन्न भागहरुमा डिजिटल पुस्तकालय सञ्चालन गर्न, छात्रवृत्ति प्रदान गर्न, महिला सशक्तीकरण र खेलकुदका लागि पनि एनसेलले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको छ। एनसेलले हालसम्म शिक्षामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बताएको छ। नेपाल टेलिकमले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक तथा सामुदायिक विकास, मानविय सहयोग जस्ता क्षेत्रमा वार्षिक रुपमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। बैद्यज अर्गनाईजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउसेज (भ्वइथ) लेे संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र खेलकुदमा ठूलो रकम खर्च गर्छ। उसले आफ्ना उद्योग वरपरका समुदायमा स्कुल निर्माण गर्ने, शारिरीक रुपमा असक्षम र गरिब विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति प्रदान गरिरहको छ। उसले वार्षिक १७ जनालाई कृषि, चिकित्सा विज्ञान र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि फिलिपिन्स पठाउने गरेको छ। सिएसआर अन्तर्गत उसले राजधानीका विभिन्न स्थानमा हरियाली सहितको यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, परिवार नियोजन संघ, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सवारी साधन पनि प्रदान गरिसकेको छ। खेलकुदको प्रवर्द्धनक लागि पनि भ्वइथले अखिल नेपाल फुटबल संघ, टोयोटा गल्फ र हक्की प्रतियोगितालाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। मोरङ अटो वर्क्स (एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेजले पनि वार्षिक रुपमा उलेख्य रकम सिएसआरमा खर्च गर्ने गरको छ। आफु आधिकारिक वितरक रहेको स्कोडा गाडीको प्रवर्द्धनार्थ इसिमोडसँगको सहकार्यमा वातावरण संरक्षणको अभियानमा हात बढाएको छ। त्यसैगरी उसले सवारी चालक र त्यसमा पनि मोटरसाइकल चालकहरुलाई सुरक्षित रुपमा सवार गर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि यामाहा सेफ राइडिङ साइन्स अभियान पनि प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने गरेको छ। युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय र गोल्छा अगनाईजेसन, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, बतासजस्ता ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठान सिएसआरमा अग्रपंक्तिमा आउँछन्। Tweet लीला घिमिरेLatest from
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत परियोजना : पिपिए र पिडिएका लागि परामर्श तीव्र नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भारतद्वारा विद्युत आयात पूर्णरुपमा खुला 'बार कोड'को सही प्रयोग नहुँदा समस्या 'YES' पार्किङ कहाँ छ? प्रतिक्रिया